ဓမ္မတာလာချိန် ချစ်တင်းနှောခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးသိမှတ်စရာများ
ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးဖြစ်လို့ အရွယ်ရောက်သူများသာ ဖတ်ပါရန်...........
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက ဒီဆောင်းပါးဟာ အရွယ်ရောက်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတဆိုင်ရာ သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းပါလို့ စကားပလ္လင်ခံထားပါရစေ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လစဉ်ကိစ္စ (ဓမ္မတာစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် ရာသီလာချိန်) ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ချစ်တင်းနှောခြင်း မပြုလုပ်ရဘူးလို့ တချို့က လွဲမှားထင်မြင်ကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ အနေအထားတစ်ခု ဆိုပေမဲ့ လုံးဝကြီး စိတ်ပျက်စရာတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အသိလေးတွေတော့ ရှိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၁။ ရာသီချိန်မှာ ချစ်တင်းနှောသင့်လား?
မိမိရဲ့စိတ်ပေါ်မှာ မူတည်တဲ့ကိစ္စပါ။ ရှေးရိုးစွဲအယူတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ စီးဆင်းတဲ့ ရာသီသွေးက ချောဆီသဘောမျိုး ဖြစ်သွားစေတာကြောင့် ခံစားမှုပိုင်းမှာ ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ActionAid စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ရပ်မှာတော့ ဗြိတိန်အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဒီအချိန်မှာ ချစ်တင်းနှောဖို့ ရှက်ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စဟာ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ဆက်ဆံဖော် နှစ်ဦးသဘောတူ ပြုမူရတာဆိုတော့ သဘောကျတယ်ဆိုရင် ပြုလုပ်ရုံပဲ။ ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ဘူးဆိုလည်း မလုပ်နဲ့ပေါ့။
၂။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား ?
ဓမ္မတာလာနေချိန်မှာ ချစ်တင်းနှောရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ အများစုက ထင်နေကြတယ်။ မမျိုးဥကြွေကျပြီး ရာသီသွေးစီးဆင်းနေချိန်မို့လို့ ကိုယ်ဝန်မရလောက်ဘူးလို့ ထင်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းက မျိုးဥဖြစ်တည်မှု စောစောဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ အကာအကွယ်မပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမျိုးသားကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ သုက်ပိုးဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ၇ ရက်လောက် ရှင်သန်နိုင်သေးလို့ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်ဆိုသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ ခေါင်းထဲထည့်တွေးဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်လွယ်တာပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် တစ်ဦးကနေတစ်ဦးကို အပြန်အလှန် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ အရမ်းများလို့ ကွန်ဒုံးသုံးဖို့လိုပါတယ်။ အိပ်ရာခင်းတွေနဲ့ တဘက်တွေကိုလည်း သန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။